Ciidamada RRU Iyo Militariga Oo La Wareegay Gabi ahaanba Wasaarada Biyaha Somaliland Iyo Amarka Sobobay Awooda Ciidan Oo Ilaa Hada La Garan laayahay Cida Bixisay |
Ciidamada RRU Iyo Militariga Oo La Wareegay Gabi ahaanba Wasaarada Biyaha Somaliland Iyo Amarka Sobobay Awooda Ciidan Oo Ilaa Hada La Garan laayahay Cida Bixisay
Hargeysa(GNN)-Warar xog ogaal ah oo ay helayso shabakada wararka Wajaalenews ayaa sheegaya in dhismihii wasaaradda khayraadka biyaha Somaliland ay saaka gabi ahaanba la wareegeen ciidamo tiro badan oo hubaysan.
Waxaana wasaaraddan oo indhawaydba ay ka jirtay khilaaf xoogan isla markaana uu khilaafkaasi ka dhex aloosnaa wasiirkii hore ee wasaaraddaas Baashe Cali Jaamac iyo agaasimihii hore ee uu wasiirku shaqada ka caydhiyay ayaa waxa uu khilafkoodu noqday mid cirka isku shareeray taasi oo gaadhay madaxtooyada Somaliland,waxaana uu khilaafkaasi saamayn ku yeeshay wasiirka khayraadka biyaha somaliland oo uu madaxwayne Siilaanyo habeen hore xilka qaaday.
Wararkan xog ogaal ah ee nasoo gaadhaya ayaa waxay sheegayaan in shaqaalihii wasaaraddu ay saaka hal mar ku waabariisteen ciidamo tiro badan oo laso dhoobay wasaaradda,iyaga oo sida naloo sheegay ay ciidamadu shaqaalihii wasaaradda dabadda usoo dareeriyeeen.
Waxaana ay ciidamadani sida la sheegay ay mamnuuceen hakadna ay galiyeen galitaankii,bixitaankii iyo dhaq-dhaqaaqii shaqo eee wasaaradda khayraadka biyaha.
Ciidamadan wasaaradda la wareegay ee iskugu jira Meleteriga iyo RRU-da Ayaan ilaa hadda la garanayn cidda ay amarka ka haystaan,sidoo kalena waxaa aan ilaa hadda la garanayn waxa dheeraadka ah ee kusoo kordhay xaaladii wasaaradda khayraadka biyaha oo wakhti xaadirkan aanay ka jirin wasiir iyo agaasime toona.
Waxii warara ee soo kordha waxaan idinla soo socodsiin doonaa wararkayaga danbe